Weather Forecast - World Weather Accurate Radar v8.0.02.2.0565.1_06_0822 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း v8.0.02.2.0565.1_06_0822 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ရာသီဥတု Weather Forecast - World Weather Accurate Radar
Weather Forecast - World Weather Accurate Radar ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
မိုးလေဝသ app ကိုအတူတိကျစွာယနေ့နက်ဖြန်, နောက်လာမည့် 14 ရက်နှင့်ပင်နောက်တစ်နေ့ 21 ရက်များအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုရယူပါ။ ဤအတောအတွင်းကြောင့်အချိန်မီအတွက်ဒေသခံမိုးလေဝသသတိပေးချက်များကိုရနိုင်သည်။
မိုးလေဝသ app ကိုဥာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ မိုးလေဝသ app ကိုသင်အချိန်မရွေး, နေရာမရွေးသည့်ခိုင်လုံသောမိုးလေဝသရုပ်သံလိုင်းဒေတာကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်သေချာ, ထိုကဲ့သို့သောပြင်ပအပူချိန်, somatosensory အပူချိန်, စိုထိုင်းဆ, လေတိုက်နှုန်း, မြင်ကွင်းနှင့်စသည်တို့ကိုဂလိုဘယ်ရာသီဥတုသတင်းအချက်အလက်အဖြစ်အများကြီးပိုလွယ်ရာသီဥတုသတင်းအချက်အလက်သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာတယ်။ မိုးလေဝသရေဒါ app ကို Android ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကိုရာသီဥတုခန့်မှန်းချက် app ကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
•မှန်ကန်စွာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရာသီဥတုတစ်နာရီအတွက်, နေ့, သီတင်းပတ်, ဒါမှမဟုတ်လာမယ့် 14 ရက်အတွင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့်လာမည့်ငါးရက်အတွင်းရာသီဥတုအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ မိုးလေဝသရေဒါ data တွေကိုအလုပ်ချိန်နာရီမွမ်းမံနှင့် update ကိုအချိန်ပင်မစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်ပြသထားသည်။
•ပိုပြီးအသေးစိတ်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ဒေတာပေးပါ။ real-time ပြင်ပအပူချိန်, somatosensory အပူချိန်, နံနက်နှင့်စသည်တို့ကိုညနပေိုငျးအပူချိန်, စိုထိုင်းဆ, လေညှနျကွားခ, လေတိုက်နှုန်း, မြင်သာပင်နေထွက်နှင့်နေဝင်ချိန်အချိန်, ခရမ်းလွန်အညွှန်းကိန်းဖိအား,
•လောကရာသီဥတုကိုခြေရာခံထားပါ။ မိုးလေဝသ, သင်အိမ်မှာစသည်တို့ကိုလန်ဒန်, ဆစ်ဒနီ, ပဲရစ်, ဆန်ဖရန်စစ္စကို, နယူးယောက်, ချီကာဂိုဘော်စတွန်ကယ်လီဖိုးနီးယား, Washington DC, ရောမမြို့, မက်ဒရစ်, တိုကျို, ဟောင်ကောင်, အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေ့နိုင်ပါသည်။
•အော်တို positioning ကိုပါသို့မဟုတ်တည်နေရာကို manual setting ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်နှင့်မိုးလေဝသအစီရင်ခံစာ app ကိုအနီးကပ်ဆုံး-တည်ရှိပြီးရာသီဥတုစောင့်ကြည့်လေ့လာပေး Real-time ရာသီဥတုကရေဒါ data ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
•သင်သည် app ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းကြားစာဘားမှတဆင့်လက်ရှိလေထုအရည်အသွေး, ရာသီဥတုသတိပေးအချက်အလက်များနှင့်မနက်ဖြန်ရဲ့ရာသီဥတုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သင်အိပ်ရာထဲက get ရှေ့မှာယနေ့ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ငါတို့သည်သင်တို့အတိုမိုးလေဝသသတိပေးချက်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
•အချိန်မီဒေသခံမိုးလေဝသသတိပေးချက်များကိုရယူပါ။ လျှပ်စီး, မိုးသီး, ရေကြီးမှုများနှင့်ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းများနှင့် ပတ်သက်. ပြင်းထန်သည့်ရာသီဥတုသတိပေးချက်များအပါအဝင်စစ်မှန်သောအချိန်အတွက်ရာသီဥတုဆိုးရွားနှိုးဆော်သံအမျိုးသားမိုးလေဝသဝန်ဆောင်မှု၏သတိပေးချက်များ, Follow နှင့်အချိန်မီထုံးစံ၌အသုံးပြုသူများကိုအကြောင်းကြား။ သငျသညျတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းနေ့၏မရောက်မီခြောက်သွေ့တဲ့အစားအစာကိုပွငျဆငျကွပါစို့။
•စမတ်လက်ထောက်ရင်းနှီးသောသတိပေးချက်။ အသစ် module ကိုအိမ်စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်ဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးရွာရွာနောက်လာမည့်နာရီအနည်းငယ်ရှိလျှင်, ငါတို့သည်သင်တစ်ဦးထီးဆောင်ကြဉ်းဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ မိုးရွာရွာနောက်လာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရှိပါသည်, ငါတို့သည်သင်တို့ကားကိုမဆေးဘဲဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
•အပြည့်အဝရာသီဥတု Widgets တွေ။ ဤတွင်ငါတို့သည်သင်တို့အိမ် screen ပေါ်မှာချက်ချင်းရာသီဥတုရုပ်သံလိုင်း updates များကိုရနိုင်သောရာသီဥတု-နာရီ Widgets တွေအမျိုးမျိုးနှင့်သင်တို့ကိုပေး။ ငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ screen ကိုထိန်းညှိဖို့ရာသီဥတုက-နာရီ Widgets တွေအမျိုးမျိုးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကိုဆက်ကပ်။
•ဆွဲဆောင်မိုးလေဝသသော့ခတ်မျက်နှာပြင်ဝစ်ဂျက်။ သင်သည်သင်၏ဖုန်းတွင်ဖွင့်အခါတိုင်းသင်ဟာသင့်ရဲ့ Android Phone ကို Lock ကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်အရနိုငျသညျ။ သင်က setting တွင်ကကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
တစ်ဦးကမှော်နောက်ခံ•။ အိမ်စာမကျြနှာ၏နောက်ခံရာသီဥတုအပြောင်းအလဲများအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ နေရောင်ခြည်, မိုးကြိုးမုန်တိုင်း, မိုးရွာရွာနှင့်တစ်ဦးကာတွန်းပုံစံအတွက်မိုးလေဝသလိမ့်မယ်လည်းလက်ရှိရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများကို။
• Dynamic ရာသီဥတုဂရပ်ဖစ်။ မိုးလေဝသ app ကိုရာသီဥတုတိုက်ရိုက်ခန့်မှန်းချက်စစ်ဆေးနေသည့်အခါသင်တစ်ဦးကြည်နူးဖွယ်အတွေ့အကြုံရှိသည်သေချာသည့်နေ့နှင့်လသည်သင်ရိုးရှင်းသောပြောင်းလဲနေသောဂရပ်ဖစ်, ပေးပါသည်။
•သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူလျင်မြန်စွာဝေစု။ ညာဘက်ကိုပွတ်ဆွဲပါသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောမြို့ရွာတို့အဘို့ရာသီဥတုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်ပင်မစာမျက်နှာပေါ်မှာထားခဲ့တယ်။ သင်တို့သည်လည်းတဦးတည်းကလစ်နှင့်သင်၏ Facebook, Twitter WhatsApp ကို, INS မိတ်ဆွေများပြည့်စုံရာသီဥတုသတင်းအချက်အလက်မျှဝေနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုအရန်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောပါ! သင်တို့သည်ငါတို့၏မိုးလေဝသရေဒါ app ကိုချစ်ကြလျှင်, Play Store ရှိကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖိုးသတ်မှတ်မှုနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များ? tct.appservice@gmail.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေး။
Facebook မှာ: www.facebook.com/weatherforecastbest/
အဆိုပါ Real-time ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်မှတဆင့်သင်ပိုကောင်းသင့်ရဲ့ခရီးသွားအစီအစဉ်များကိုစီစဉ်ပေးနိုင်သည်။ မကောင်းတဲ့သို့မဟုတ်မလိုလားအပ်သောရာသီဥတုတော့ဘူးသင့်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဖကျြဆီးပါစေဘယ်တော့မှမ!
ရာသီဥတုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ app ကိုယခုအခမဲ့များအတွက်အကောင်းဆုံးရာသီဥတုရေဒါ app ကို Download လုပ်ပါ! ကျနော်တို့တိုးတက်စေခြင်းနှင့်အတူတူကပိုကောင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
Weather Forecast - World Weather Accurate Radar အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Weather Forecast - World Weather Accurate Radar အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Weather Forecast - World Weather Accurate Radar အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Weather Forecast - World Weather Accurate Radar အား အခ်က္ျပပါ
gyjano စတိုး 21.26k 3.39M
Weather Forecast - World Weather Accurate Radar ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Weather Forecast - World Weather Accurate Radar အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း v8.0.02.2.0565.1_06_0822
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://schedulemanag.tclclouds.com/tct-privacy-policy.html
လက်မှတ် SHA1: 66:19:52:A0:60:57:EA:00:57:4A:83:5F:A4:F8:88:DD:53:3D:9F:68
ထုတ်လုပ်သူ (CN): TCL-releasekey
အဖွဲ့အစည်း (O): TCT
နယ်မြေ (L): Zhangjiang-Hi-Tech-Park
Weather Forecast - World Weather Accurate Radar APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ